Ogaden News Agency (ONA) – Donald Trump oo ku dhawaaqey in ay ka baxeen heshiiskii Nukliyeerka ee Iran iyo dareenka Caalamka.
Donald Trump oo ku dhawaaqey in ay ka baxeen heshiiskii Nukliyeerka ee Iran iyo dareenka Caalamka.
Posted by Daljir	/ May 9, 2018
Madaxweynaha Dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sida la sugaayey markii horeba ku dhawaaqey in dalkiisu uu ka baxay heshiiskii Nukliyeerka ee Iran, kaas oo ay Iran la saxiixdeen P5 oo loo soo gaabiyey shanta dal ee awooda leh Britian, China, France, Russia, USA iyo Germany oo lagu daray (P5+1) sidoo kale waxaa heshiiska wax ka saxiixey Midowga Yurub, heshiiskaas ayaa laga soo shaqeynaayey muddo 10 sano ah.
Donald Trump oo saxiixaya Wareegtada ka bixitaanka heshiiska
Donald Trump ayaa khudbad uu ka jeediyey Aqalka Cad oo Telefishanada caalamka si toos ah uga baxaayey sheegay in Iran ay tahay dalka barbaariya argagixisada caalamka. Trump ayaa sheegay in Iran ay taageerto Taliban iyo Al-qaacida, taas oo dad badan la yaab ku noqotey, sidoo kale wuxuu sheegay in heshiiska dartiis ay ku haleen Balaayiin lacagta Maraykanka ah oo kaash ah. Trump ayaa sidoo kale Iran ku eedeeyey in ay afduubteen muwaadiniin Maraykan ah oo ciqaabeen isaga oo hordhac uga dhigey ka bixitaanka Heshiiska. Heshiiska ayuu ku tilmaamey mid aad u xun, wuxuuna sheegay in sirdoonka Israel ay ogaadeen soona bandhigeen in Iran ay khiyaameysey heshiiska isla markaana dooneyso awoodda Nukliyeerka.
Trump ayaa wuxuu yiri:
– Maanta waxaan ku dhawaaqayaa in aan ka baxney heshiiskii Nuliyeerka ee IRAN, sidoo kale waxaan saxiixayaa Wareegto qeexaysa in dib loo saarayo Iran cunno-qabateyntii hore ee saarneyd iyo mid ka sii daran.
Sida ay sheegeen dalalka kale ee heshiiska wax ka saxiixay iyo hay’adda tamarta iyo nukliyeerka ee caalamiga ah IAEA, Iran waxay u hoggaansantey heshiiska la kala saxiixdey 2015 wax caqabad ah oo ka hor imaanayana heshiiska laguma arkin.
Waxaa la aaminsan yahay in Donlad Trump ay Israil ku cadaadisey go’aanka uu qaatey, maalmo ka hor khudbadiisa waxaa bandhig sida riwaayad ah sameeyey Raysalwasaraha Israel Benjamin Netanyahu oo sheegay in ay hayaan caddeymo muujinaya in IRAN ay khiyaantey heshiiskii isla markaana dhiseyso Nukliyeer, sidoo kale Netanyahu ayaa noqdey hoggaamiyihii u horeeyey ee hadley kadib markii Donalad Trump ku dhawaaqey ka bixitaanka, waxaana uu ku soo dhaweeyey sacab.
Trump ayaa u digey dalalka kala shaqeeya IRAN heshiiskan ama in ay soo saarto quwadda Nukliyeerka. Waxaana uu isla goobta ku saxiixay Wareegto Madaxweyne ee ka bixitaanka heshiiska, iyo cunno-qabateynta Iran. Dhibaatada ugu badan ayaa la aaminsan yahay in ay dhici doonto marka Maraykanku cunno qabateyn saaro shirkadaha Yurubiyaanka ah ee heshiisyada la saxiixdey Iran tan iyo sanadkii 2015, haddii ay ka bixi waayaan.
Qaar kamid ah hoggaamiyaasha caalamka ayaa durba jawaab ka bixiyey kadib go’aankii Madaxweynaha Maraykunku ku dhawaaqey ee uga baxay heshiiskii ay la galeen IRAN ee Nukliyeerka, hoggaamiyaasha ka hadley waxaa kamid ah Raysalwasaaraha Israel oo ugu horeeyey cid Sacab iyo farxdad ku soo dhaweysa go’aanka, sidoo kale waxaa ka hadley Wakiilka Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub iyo Maadaxweynaha Faransiiska.
Raysalwasaaraha Israil benjamin Netanyahu oo go’aanka Trump soo dhaweeyey
Raysalwasaaraha Israil oo todobaadkii hore Bandhig riwaayaeed oo kale ah ku soo bandhigay wax uu ku sheegay sir ay ka heleen Iran oo dhiseysa quwadda Nukuliyeerka ayaa noqdey hoggaamiyihii u horeeyey ee hadley wax yar kadib markii Downald Trump dhameeyey khudbaddii uu ka jeedinaayey Aqalka Cad ee uga baxay heshiiskii Iran. Netanyahu ayaa sheegay in uu aad u soo dhaweynayo go’aanka Donald Trump oo uu yahay mid xikmadeysan, kaas oo dhabar jab ku ah Dowladda Argagixisada ee Iran sida uu yiri. Netanyahu ayaa sheegay in bilowgii heshiiska uu ka soo horjeedey una arkaayey mid khatar ah, waxaanse maanta oranayaa ayuu yiri, Iran ma heleyso quwadda Nukliyeerka, maanta, beri iyo weligeedba.
Qaybsanaha arrimaha dibadda ee EU Federica Mogherini
Gabadha u qaabilsan Midowga Yurub Arrimaha Dibadda, Federica Mogherini ayaa sheegtey in haddii ay Midowga Yurub yihiin ay ka xunyihiin go’aanka Maraykanku qaatey, sidoo kale waxay hoosta ka xariiqdey in ay ku taagnaanayaan heshiiska, wax ay ka bedalayaana aysan jirin, waxaana ay ugu baaqdey IRAN in ay sidaas oo kale ugu taagnaadaan heshiiska.
Emmanuel Macron oo isticmaalaya bartiisa Twitterka ayaa sheegay in Faransiiska, Jarmalka iyo Ingriiskuba ka xun yihiin go’aanka Maraykanku ku dhawaaqey ee ah in ay ka baxeen heshiiska JCPOA, heshiiska Nukliyeerka ee Iran ay la galneen waa mid shaqeynaya dhankayaga ayuu yiri Macron.